यी हुन् एउटा पनि विमानस्थल नभएका विश्वका पाँच देश ! – Online Khabar 24
अहिलेको दुनियाँमा कुनै पनि मुलुकका लागि विश्वसँग जोडिने एउटा अनिवार्य माध्यम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो ।
तर विश्वमा केही यस्ता देश पनि छन् जसको एउटा पनि विमानस्थल छैन ।
१. एण्डोरा : युरोपको छैटौँ सबैभन्दा सानो देश एण्डोरा विश्वको १६ औँ सानो देश हो । यसको क्षेत्रफल ४६८ वर्ग किलोमिटर छ । यो देशको जनसंख्या ८५ हजार रहेको छ । एण्डोरामा कुनै पनि विमानस्थल छैन । यद्यपि तीन वटा प्राइभेट हेलिप्याड भने छन् ।
यो देशको सबैभन्दा नजिकको विमानस्थल भनेको स्पेनको विमानस्थल हो जुन १२ किलोमिटर टाढा पर्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि एण्डोरामा वर्षेनी लाखौँ पर्यटक घुम्न आउँदछन् ।
५. भ्याटिकन सिटी : यो विश्वको सबैभन्दा सानो देश हो । इसाई धर्मको प्रमुख सम्प्रदाय क्याथोलिक चर्चको केन्द्र हुनुका साथै क्रिस्चियन सर्वोच्च धर्मगुरु पोपको निवास स्थान पनि हो । भ्याटिकको क्षेत्रफल यतिधेरै कम छ कि सिंगै देशको जमिन प्रयोग गर्दासमेत एउटा एयरपोर्टलाई चाहिने जग्गा पुग्दैन । इटालीको रोम एयरपोर्ट भ्याटिकन सिटीबाट सबैभन्दा नजिकमा पर्ने विमानस्थल हो । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevअमेरिकाको क्यालिफोर्निया बस्ने भन्दै युवाहरूसँग सम्बन्ध बढाउने नेपाली युवती !
nextघरमा अचानक बढ्न थालेको खर्चले हालत खराब भयो ? तुरुन्त ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा !